﻿ सूर्यमा दाग देखा पर्यो !
सूर्यमा दाग देखा पर्यो !
काठमाडौं । केही दिनयता सूर्यको माथिल्लो भागमा दाग देखिएको ‘नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी’ले जनाएको छ ।
सोसाइटीका अनुसार सुर्यको माथिललो भागमा चुम्बकीय क्षेत्र गहन हुन गई दाग देखिएको हो ।
सूर्यमा यस्तो हुँदा सामान्य अवस्थाभन्दा चुम्बकीय गतिविधि हजार गुणा बढी हुन गई त्यस स्थान अरु भागभन्दा अँध्यारो हुने गरेको सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
सूर्यको गतिविधिलाई वैज्ञानिकहरु सूक्ष्म रुपले अध्ययन गर्छन् । भू–उपग्रहमा असर गर्ने भएकाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, मौसम पूर्वानुमान तथा दिशानिर्देश जस्ता अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित सेवा प्रभावित हुन्छन्
फेसबुकमाथि ५ अर्ब डलर जरिवाना
ट्वीटरमा धर्ममा आधारित अमानवीय ट्वीटमा बन्देज
वडा सचिव मदिरामा लठ्ठ, सेवाग्राहीले लगाए प्रहरीको जिम्मा
फेसुबकबाट ८० लाख रुपैयाँ ठगी गर्ने तीन युवक पक्राउ
बाढी–पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ७८ पुग्यो
ओखलढुंगामा भीरबाट लडेर एक युवतीको मृत्यु